पाँचजना भूतपूर्व र एकजना बहालवाला प्रधानमन्त्री समेत यतिबेला चुनावी मैदानमा
www.bsgnews.com | National News | Mangshir 15
पाँचजना भूतपूर्व र एकजना बहालवाला प्रधानमन्त्री समेत यतिबेला चुनावी मैदानमा छन्।
तर हालसालै उनले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने मोह नलुकाएरै भने, &quot;ज्योतिषीले सातपटक प्रधानमन्त्री बन्छन् भनेका छन्। फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने त मै हुँ नि।&quot;
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार रहिसकेका राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, &quot;देश चलाउने यत्रो ठूलो यज्ञमा सामेल हुँदा एक पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि थाक्नु पर्ने हो। तर किन थाक्दैनन् भने उनीहरुले काम गरेकै हुँदैनन्। कुन चाहिं प्रधानमन्त्री सफल भएका छन्? काम गर्न नसकेपछि फेरि आफै हुनु पर्छ किन भन्ने?&quot;
बीपी कोइराला जेलमा कथा-कविता लेख्नुहुन्थ्यो। पुष्पलाल आफ्नो दस्तावेज आफैँ लेख्नु हुन्थ्यो। बीपीले जेलमा आफ्नो भाँडा आफैँ माझेको पढेका छौं। अहिलेको नेतृत्वको ताल हेर्नुस् त, ढोका नखोलिदिए गाडीबाट झर्दैनन्। त्यो भनेको ढोका खोल्ने मान्छेको व्यवस्था नहुँदासम्म तिनले अवकास नै लिँदैनन्
'बाह्रौं खेलाडी' पुस्तकका लेखक लोकेन्द्रबहादुर चन्द ४४ वर्षको छँदा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए।
उनले हालसालै बीबीसीसँग भनेका थिए, &quot;अब राजनीतिको तनाव कति बोक्ने? पन्छिने उमेर पनि भयो। अब किताब पढ्न-लेख्न सकिन्छ।&quot;
उनीहरु अझै मूलधारको राजनीतिको केन्द्रमै छन्।
पञ्चायतकालका एकजना चर्चित अनेरास्वियु नेता टंक कार्की भन्छन्, &quot;बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, मदन भण्डारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीको पुस्तापछि नेतृत्वको गुण ह्रासोन्मुख छ। सत्तामै बसिरहनु पर्छ भन्ने के छ, पार्टी पो चलाउनु पर्छ। नेताले सुविधामा बढी ध्यान केन्द्रित गरे।&quot;
तस्वीर कपीराइट facebook/LBC
Image caption राजनीतिबाट विश्राम लिएका लोकेन्द्रबहादुर चन्द ४४ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए
ठूलै हलचल र चर्चा निम्त्याउँदै पहिलो पटक ५३ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डमा फेरि प्रधानमन्त्री बनेर 'ह्याट्रिक' गर्ने आकांक्षा देखिन्छ।
'भयानक बलिदानीको कठीन बाटो' हिंडेका उनीहरुले पनि बारम्बार शक्तिमा पुग्ने पुरानै दलका नेताको पदचाप किन पछ्याए?
माओवादीको मूलधारबाट हालसालै अलग्गिएका एकजना टिप्पणीकार नरेन्द्रजंग पिटर भन्छन्, &quot;सिद्धान्तको राजनीतिको अन्त्य र सुविधाको राजनीति शुरु भएपछि सुरक्षाको राजनीति समातिन्छ। त्यसैले अन्त्यसम्म पनि शक्ति हातमा केन्द्रित होस् भन्ने मनोविज्ञान हुन्छ। कारण त्यही हो।&quot;
आउनु त पर्यो मैदानमा, जनताको बीचमा परीक्षण हुनु पर्यो। संकट पर्दा, गोली थाप्दा, लड्दा र घाइते हुँदा एउटा, परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा उभिँदा बेपत्ता। अनि अर्को कसैलाई दिएर हुन्छ? युवा भनेर मात्रै हुँदैन। युवा फूर्ति चाहिन्छ। गतिशीलता, समर्पण, इमान्दारी र निष्ठा चाहिन्छ
उनी प्रश्न गर्छन्, &quot;आउनु त पर्यो मैदानमा, जनताको बीचमा परीक्षण हुनु पर्यो। संकट पर्दा, गोली थाप्दा, लड्दा र घाइते हुँदा एउटा, परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा उभिँदा बेपत्ता। अनि अर्को कसैलाई दिएर हुन्छ? युवा भनेर मात्रै हुँदैन। युवा फूर्ति चाहिन्छ। गतिशीलता, समर्पण, इमान्दारी र निष्ठा चाहिन्छ।&quot;
राजनीतिको चुचुरोमा पुगिसकेपछि नेताहरु उमेर छँदै किन किनारा लाग्न चाहँदैनन्?
उनले भने, &quot;बीपी कोइराला जेलमा कथा-कविता लेख्नुहुन्थ्यो। पुष्पलाल आफ्नो दस्तावेज आफै लेख्नु हुन्थ्यो। बीपीले जेलमा आफ्नो भाँडा आफै माझेको पढेका छौं। अहिलेको नेतृत्वको ताल हेर्नुस् त, ढोका नखोलिदिए गाडीबाट झर्दैनन्। त्यो भनेको ढोका खोल्ने मान्छेको व्यवस्था नहुँदासम्म तिनले अवकास नै लिँदैनन्।&quot;
डेढ दशकअघि राजा ज्ञानेन्द्रले 'शान्ति स्थापनाको निम्ति तीन वर्ष' भन्दै सत्ता हातमा लिएका थिए।